Nomena anarana ireo hotely sy trano fandraisam-bahiny tsara indrindra
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nomena anarana ireo hotely sy trano fandraisam-bahiny tsara indrindra
Aprily 15, 2019
Miaraka amina iraka hihoatra ny andrasan'ny vahiny amin'ny lafiny rehetra azo atao, ny trano fisakafoanana sy ny trano fandraisam-bahiny mihaja Exc Exclusive Group dia lasa anarana itokisan'i Karaiba amin'ny fitsangatsanganana rehetra. Ilay vondrona ananan'ny fianakaviana sy miasa, izay manana sy mitantana trano fandraisam-bahiny misy kintana dimy nahazo loka tany Mexico, ny Repoblika Dominikanina, ary i Jamaika, dia hanohy hanome fananana mahatalanjona sy serivisy tsy manam-paharoa rehefa miditra amin'ny toko manaraka miaraka amin'ny The Excellence Collection .
Ny Excellence Collection dia hahitana ireo marika telo avo lenta an'ny vondrona: ny Exclusivité Resorts ho an'ny olon-dehibe ihany miaraka amin'ny fananana rehetra ao Cancun, ny Riviera Maya, Punta Cana, ary Montego Bay; Hotely malalako ho an'ny olon-dehibe butik, afa-mandositra rehetra; ary ny Finest Resorts manolotra haitraitra maoderina rehetra amin'ny sokajin-taona rehetra.
Tamin'ny fisokafan'ny Excidence Oyster Bay tamin'ny taon-dasa ary ny drafitra ho an'ny Punta Cana Finest amin'ny taona 2020, ny orinasa dia nifantoka tamin'ny fomba vaovao hamaly ny filàna miovaova hatrany amin'ny tsena, ary namorona ny The Excellence Collection hanaovana izany. Ny Excellence Collection dia mitondra marika vaovao miaraka amina logo maoderina nohavaozina ary hyperfocus natokana amin'ny fanomezana tsy manam-paharoa an'ny fananan'ny vondrona tsirairay.
Ireo singa vaovao ireo dia manamarika dingana iray lehibe ho an'ny vondrona mandray vahiny, izay niaina fitomboana haingana tao anatin'ny folo taona lasa. Miaraka amin'ny andry telo lehibe an'ny Bespoke Service, Extraaced Moments, ary ny Innovative Curation izay ivon'ny The Excellence Collection, ny marika ho an'ny ray aman-dreny dia fampanantenana natao ho an'ny vahiny rehetra ao amin'ny Excellence Collection.
"Ny Excellence Collection dia fivoaran'ny Exclusive Group Luxury Hotels & Resorts. Ny andry telo misy antsika dia voafaritra tsara, miaraka amin'ny tanjona farany hampita traikefa tena misy izay mihoatra ny fijanonan'ny vahiny. Izahay dia manao izany amin'ny alàlan'ny fomba manokana sy voatokana ho an'ny rendrarendra, "hoy ny filoha lefitry ny Sales & Marketing an'ny The Excellence Collection, Andriamatoa Domingo Aznar.